Afrika: Waddan Laga Mamnuucay Koobka Adduunka
HomeAfricaAfrika: Waddan Laga Mamnuucay Koobka Adduunka
05/10/2017 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka kubadda cagta adduunka ayaa soo saaray go’aan dhif ah oo ay koobka adduunka ee 2019 ee haweenka kaga mamnuuceen waddanka Equatorial Guinea, kaddib markii lagu helay in ay ciyaarsiiyeen 10 ciyaaryahan oo sharci darro ah.
Equatorial Guinea ayaa toban ka mid ah ciyaartoygeeda oo waraaqo been abuur ah sita ciyaarsiisay tartankii Olambiga haweenka ee sannadkii 2016 lagu qabtay Brazil.
FIFA ayaa baadhis ay samaysay ku ogaatay in waddankani uu ciyaarsiiyey laacibiinta Muriel Linda Mendoua Abessolo iyo Francisca Angue Ondo Asangono, kuwaas oo gudbiyey aqoonsiyo ay ku jiraan baasabooro is khilaafsan oo markii dib loo baadhay la ogaaday in da’ sharciga dambe iyo sharcigii hore ugu diiwaangashanaa uu farqi weyn u dhexeeyo.
Waxay FIFA go’aamisay in xidhiidhka kubadda cagta Equatorial Guinea aanay ka xaadirin koobka adduunka ee 2019, isla markaana ay bixiyaan lacag ganaax ah oo dhan $102,000 oo u dhiganta (£77,700).
Guddida Olambiga ayaa hore ugu soo rogay waddankan in aanu ka qayb-geli doonin ciyaaraha Olambiga haweenka ee 2020.
Ciyaaryahannada sharciga ku gefay ee sharciga been abuurka ah samaystay ayaa iyagana lagu rogay ganaaxyo 10 bilood ah oo aanay garoomada lugta gelin karin.
Manchester United Oo Ciyaar ay Pogba iyo Blind Kaga Dhaawacmeen Ugu Gudubtay Siddeed Dhamaadka Europa League
Manchester United Oo Soo Noolaysay Rajadii Van Gaal Kadib Guushii FA Cup ka Ee Derby County
Celta Vigo Oo Si Arxan Darro Ah Ugu Tumatay Barcelona + Messi Iyo Neymar Oo Foorar Miciinsaday